crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Sama-falayaasha Fardooleyda Jidadka – The Knights of Roads. | HimiloNetwork
Sama-falayaasha Fardooleyda Jidadka – The Knights of Roads.
Posted by: Zakariya in Wararka May 16, 2017	0 240 Views
Jeddah (Himilonews) – Sanadkii 2014-ka, dhalinyaro Sucuudi ah ayaa bilaabay inay si samafal ah ugu dayac-tiraan gawaarida shacabka kaga hallaaba jidadka dalkaasi inta lgu guda-jiro maalmaha farxadda Ciidda.
Kooxdan samafalka ah waxay la baxeen magaca Fardooleyda Jidadka – Roads of Knights. Waxay adeeg lacag la’aan u qabtaan dadka baabuurta kaga hallaabaan jidadka – iyaga oo u dayac-tira – dadaal ay rabaan inay ku dhaliyaan tusaale wanaagsan.
Ururkan ayaa sameystay mareeg ama website laga soo xiriiro oo ay ku jiraan magac-yada xubnaha, halka ay joogaan iyo siday kuugu soo gaari karaan.
Gudaha mareegta iyo farriimaha ay dadku ka bixiyeen samafalkooda, waxay keensatay in qaar kamid ah booqdayaasha website-ka ay ka qeyb noqdaan – iyaga oo xiriirrada laga heli karo ku reebay barta qoraallada. Waxayna doonayeen in xubnaha lagu daro.
Mareegta ayaa u sameysneyd inay xubnaha kala duwan ee ururka kusoo biiraya u qoondeyso meelo cayiman oo ka agdhow, juqraafi ahaan, halka ay ku sugan yihiin.
Helaha ururkan, Abu Faris wuxuu ku nool yahay magaalada Jeddah ee dalka Sucuudiga. Wuxuu anba-qaaday qorshahan si dadka xaafaddiisa kula nool uu ugu deeqo adeeg samafal ah marka ay baabuurta ka jabaan ama hallaabaan. Wuxuu moobilkiisa ka dhigay mid la heli karo mar kasta – isaga oo jaarkiisa u doortay inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee ka dheefsada abaalkiisa.
“Waxaan helay in si lamid ah aniga ay da’yarta Sucuudiguna dooneyso inay bulshada caawiyaan. Waana markii aan ballaariyay oo aan sameeyey mareeg lagala socdo adeeggan,” ayuu yiri. “Mashruucan 100% waa lacag la’aan. Waana mid da’yartu ay bulshadooda ku celiyaan tayada xooggooda kuna caawinayaan.”
Laba milyan ayaa isla sanadkii 2014 baraha bulshada ku wadaagay sheekada ururkan. “Waxaan shaqsiyan shaqadan bilaabay lix sano kahor intaan 2014-kii ku dhiirran inaan ballaariyo,” ayuu yiri abu Faris.
“Bil kaliya markii aan 30 xubnood oo kaliya ku sameeyey mareegta, laba toddobaad kadib 150 xubnood ayaa kusoo kordhay. Maalinba maalinta xigtana wuu sii ballaaranayay. Waxa kaliya ee mashruucani u baahan yahay ayaa ah waaya’aragnimo iyo waqti. Qof kasta oo labadaas heystana wuu nagu soo biiri karaa,” ayuu sii raaciyay.
70% dadka ay adeegga siiyaan waa shisheeye aan Sucuudi ku dhalan ama u dhalan. “Bil gudaheed, waxaan saacidnay 5,000 oo qof maalmihii Ciidda, waxaana dayac-tirnay 16 gaari,” ayuu yiri.
“Dadku waxay u baahan yihiin kaalmo markan oo kale. Qofka usoo ban-baxana waxay uga duceynayaan qalbiga,” ayuu sii raaciyay abu Faris.
“Maalin kasta laba saac oo kamid ah waqtigayga waxaan ku bixiyaa inaan kusoo wareego magaalada si aan u helo qof aan kaalmeeyo,” ayuu yiri.
Hayeeshe mawaayo qof uu caawiyo. Hadda oo ururkoodu laba sano jirsanayo, waxay baahida loo qabo gaartay in xubnaha samafalayaasha ahina bataan – adeegooduna uu noqdo mid aan dhamaad laheyn.
Previous: 15 May – Maalinta Caalamiga ee Qoysaska.
Next: Kailash Satyarthi – Ninka hoggaamiyay dhaq-dhaqaaqa ka dhanka ah Addoonsiga Carruurta.
Waayeel Masiix ah oo arday Muslimiin ah Qur’anka u dhiga
Sheekada 11-jirka Cunnooyinka – lacag la’aan – ku kariya.
Haweeney sankeeda laga soo saaray Baranbaro nool
Siduu Islaamku ugu faafay Shiinaha?!